PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ် စာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးမီ ပြည်သူအား ချပြရန် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ပြော...
UNFC အဖွဲ့မှ KNU နှုတ်ထွက်
UNFCနှင့် ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ငြိမ်းခ...
UNFC” ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံ
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် ၏ ယုတ်မာမှု
ငိမ်းချမ်းရေး ရောင်ခြည် သန်းလာပြီ လား
ဖုံးကွယ်ထားသော နိုင်ငံသားများ၏ တန်ဖိုးမြင့် သဘာဝအရ...
သဘာဝဘေးအန္တာရယ်နှင့် ငလျင်ဒဏ်များ" ကြုံလာလျှင် မည်သ...
တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို နလပိန်းတုံး ထင်နေလား . . .?
အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ဆီရီးယားနယ်ထဲအထိ တိုက်...
TNLA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ ယနေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်...
“တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်က ညှိရတာ အခက်ခဲဆုံးပါပဲ”
အစိုးရတပ်မတော် တပ်မ(၈၈)မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင်...
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ် စာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးမီ ပြ...
အပစ်ရပ်မူကြမ်း လက်မှတ်ရေးမှတ်ထိုးမှုတွင် သက်သေအဖြစ်...
ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UNFC ကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံေ...
တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ဆ...
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် စာချုပ် ရေးဆွဲမှု ဆက်လက် ညှိနှု...
အပစ်ရပ်ခိုင်မာဖို့ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့...
NCCT နှင့် UPWCတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲ သတင်းရုပ်သံ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး အခြေခံမူ အစိုးရသဘောတ...
တပြည်လုံး အပစ်ရပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဖက်ဒရယ်...
လက်ရှိအပြောင်းအလဲ ရန်ကုန်မြို့ခံတွေရဲ့ အမြင်အင်တာ...
မိန်းကလေးချစ်သူထားဖို့ အချိန်မရှိသူတွေ အတွက်
တောင်သူများအား သေနတ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်ရန် ပစ်ခတ်မိန့်...
တအာင်းတပ် TNLA နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ် တို့ တိုက်ပွဲ...
တွေ့ဆုံပွဲ ထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံရေး ပါတီအများစု လက်မခံ
အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်အန္တရာယ် ညီညွတ်စွာ တိုက်ဖျက်ဖိုိ...
ဇာဂနာ ပြောတဲ့ ထိပ်ပြောင် အကြောင်း တတိယလှိုင်းကြမ်း...
မန္တလေး တံတားဦးလေဆိပ်အကြောင်း ပြောပြန်ရင် လွန်ရာကျ...
ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ မပေါ်သရွေ့ လက်နက်ကိုင် တပ်များ ...
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၆ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ...
အီသီယိုးပီးယားက အမြန်လမ်းမနဲ့မြန်မာပြည်က အမြန်လမ...
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၆ နှစ်မြောက်နေ့ ရုပ်သံမှတ...
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၆ နှစ်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
8.8.8.8 အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့
ဟာမက်ဇ်တွေ ဂါဇာမှာရှိတဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ ဟိုတယ်ဇုံထဲက...
ဒီနေ့ တီဗီ သတင်းမှာလာသွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ့ည်ေ...
လိုက်ဘေးရီးယားတွင် အီဘိုလာကြောင့် ဆရာဝန် ၆၀ ကျော်...
တိုင်းရင်းသားညီလာခံရဲ့ မူ ၁ဝချက်ထဲက ၃ချက်ကို ညှိနိ...
အီဘိုလာ ပိုးကူးဆက်ခံရသူများ၏ ဖြစ်ပေါ်နေမည့် လက်ခဏာမ...
ကပ်ရောဂါဆိုးတွေ ကမ္ဘာကြီးမှာ တဖြည်းဖြည်းဆိုက်လာပြီ ...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းမျာ...
(Ethnic Armed Organizations' Summit ) တိုင်းရင်းသာ...
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ် စာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးမီ ပြည်သူအား ချပြရန် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ပြော...
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် စာချုပ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုးမီ ပြည်သူလူထုအပါအဝင် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီး သီးအား ချပြရန်လိုအပ်ကြောင်း NCCT ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (၂) ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ကပြောကြား သည်။
သြဂုတ် ၁၈ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ သော ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော် မတီ(UPWC) တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ တစ်နိုင်ငံ လုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT နှင့် နိုင်ငံ ရေးပါတီများ ပထမဆုံးအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက် ၍ သုံးပွင့် ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဗိုလ် ချုပ်ဂွန်မော်က အဖွင့်မိတ်ဆက် စကားပြောကြားရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့ NCA လက် မှတ်ကိုမရေးထိုးမီ သက်ဆိုင် ရာ လူထုနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများကို ချ ပြဖို့လို တယ်’’ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော် က တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက် ဆောင် ရွက်ရာတွင် NCCT အဖွဲ့ဝင်များအပြင် NCCT အဖွဲ့ဝင်မဟုတ် သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် ကျွမ်း ကျင်ပညာရှင်များအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ပြောသည်။
‘‘အခု ကျွန်တော်တို့ပြောနေ တာက အားလုံးပါဝင်ရေးပဲဖြစ် ပါ တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာစမလဲ၊ ဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲ၊ ဘာ ကြောင့် လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆက် လက်ပြီးဆောင်ရွက် ရမယ့်လုပ် ငန်းအားလုံးဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်သူလူထုအပါ အဝင် တစ်နိုင် ငံလုံးက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်’’ ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဂွန် မော်ကပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အရေး ကြီးသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါ ဝင်၍ မကြာမီလက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့် ကြောင်း UPWC ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းက အဖွင့်မိတ်ဆက် စကားတွင်ထည့် သွင်းပြောသည်။
‘‘သမိုင်းဝင်စာချုပ်ကြီးကို လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေ တဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် (Framework) မူဘောင်များ ချမှတ်တဲ့အ ပိုင်းကို ပါဝင်သင့်ပါ ဝင်ထိုက်သူ အားလုံးနဲ့ လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက် သွားဖို့လိုတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ သဘောတူပါတယ်’’ဟု ဦးအောင် မင်းက ဆိုသည်။
သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့သော အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၄ ပါတီိမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ် သက်သည့် သဘောထားအမြင် များ တင်ပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
Posted by PNSjapan at 9:19 AM